.:: IT WEB CRAZY BOY ::.: Flash-SWF to AVI-GIF V2.1 Portable
Flash-SWF to AVI-GIF V2.1 Portable
ဒီဆော့ဝဲလ်လေးက SWF ဖိုင်တွေကနေ GIF ပုံ ဖော်မက်ပြောင်းတဲ့နေရာမှာ တော်တော်လေးကို အဆင်ပြေပါတယ်။
အရင်က SWF to GIF ဆော့ဝဲလ်တွေ တော်တော်များများ သုံးခဲ့ဖူးပါတယ်။ ပြဿနာက GIF ဖော်မက်ပြောင်းပြီးရင်
ပုံက အရမ်းကို မှုန်ဝါးသွားတာ ၊ resolution သေးသေးလေးပဲ ပေးပြီး ထပ်ချဲ့လို့ မရတာ စတဲ့ အဆင်မပြေမှုလေးတွေ
ရှိလို့ ဆက်မသုံးဖြစ်တော့ပါဘူး။ ခု ဒီဆော့ဝဲလ်လေးကတော့ မူရင်း Flash SWF ဖိုင်နဲ့ ပြောင်းပြီးတဲ့ GIF ပုံ ၂ ခုကို
ယှဉ်ကြည့်လိုက်ရင် အတူတူလို့တောင် ထင်ရလောက်တဲ့အထိ ပုံရဲ့ quality က ကောင်းပါတယ်။ resolution ကိုလည်း
စိတ်ကြိုက် ချဲ့လို့ ရတယ်။ ဒီအောက်က ပုံလေးက ကျွန်တော် အရင်နေ့က ဒီနေရာမှာ တင်ပေးထားတဲ့ Flash ပုံလေးကို
စမ်းကြည့်ထားတာပါ။ သူငယ်ချင်းတို့လည်း သုံးကြည့်ချင်တယ်ဆိုရင် အောက်မှာ ဒေါင်းလုပ်လင့် ပေးထားပါတယ်။
Download: Flash-SWF to AVI-GIF V2.1 Portable
Flash SWF မှ GIF ဖော်မက်ပြောင်းနည်း
[ 1 ] Open ကို နှိပ်ပြီး ကိုယ် GIF ပုံပြောင်းချင်တဲ့ Flash ဖိုင်ကို ရွေးဖွင့်လိုက်ပါ။
[2] ပုံ resolution က Get Sound File ရဲ့ ညာဘက်နားက 250 မှာ ချိန်ပါ။
[3] Capture Frames ကို နှိပ်ပါ။
[4] Save GIF မှ Save to GIF ကို နှိပ်ပြီး သိမ်းလိုက်ပါ။
ဒါဆို သူငယ်ချင်း Flash SWF ကနေ GIF ပုံဖော်မက်ပြောင်းတာ ပြီးပါပြီ။ အဆင်ပြေကြပါစေ..
မှတ်ချက်။ ။ ဒီ ဆော့ဝဲလ်လေးကို Full Version ဖြစ်အောင်နဲ့ Portable လေးဖြစ်အောင် ကျွန်တော် ကိုယ်တိုင်
ပြုလုပ်ထားခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် ကူးယူမျှဝေမယ်ဆိုရင် ကျွန်တော့်ဆိုဒ်ကို Credit ပြန်ပေးဖို့ မေတ္တာရပ်ခံပါတယ်။
Posted by Thurainlin at 11:31